ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Facebook ပေါ်မှာရက်စွဲလုပ်နည်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 22 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သငျသညျအစဉျအသင့်သူငယ်ချင်း၏ Facebook ကဓာတ်ပုံအပေါ် commented သူတစ်ဦး cutie ပြောက်ပြီ? Facebook ကတကယ်တော့အလွန်ကြီးစွာသောတွေ့ဆုံရန်လမ်းနှင့်ရက်စွဲလူဖြစ်နိုင်. သို့သော်, လိုက်လျှောက်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသေချာအောင်သင်ကြပါဘူး e-ဖျက်ဆီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ရှိပါတယ်.
အုပ်ချုပ် #1: သိပ်မကြာမီမဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်လုပ်ပါ
တစ်ကယ့်စကားလက်ဆုံသို့မဟုတ်နိဒါန်းမီကမိတ်ဆွေတစ်ဦးတောင်းဆိုချက်ပေးပို့ခြင်း creepy ဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့မချခင်က Facebook အညှာရန်ဆုံးဖြတ်ကြပါလျှင်, သင်တစ်ဦးဓာတ်ပုံတူ accidently ချင်ကြပါဘူးသကဲ့သို့သင်တို့သတိပညာရှိများမှာသေချာအောင်. သင်တစ်ဦးဖုန်းနံပါတ်လုံခြုံပါတယ်တခါနောက်သို့လိုက်ရန်လက်မ၏ A ကောင်းဆုံးအုပ်ချုပ်သည်, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်လုပ်နိုင် Facebook ပေါ်မှာမိတ်ဆွေတစ်ယောက်.
အုပ်ချုပ် #2: Poke နဲ့အလွန်အကျွံ Facebook ကထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ပါ
အများဆုံးမျက်စိထဲမှာ, Poke အမှန်တကယ်ထိုသို့ပြုမှသတ္တိတက်စီရင်ခင်းကျင်းခြင်းမရှိဘဲ hi ဟုဆို၏နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. တကယ်တော့, Poke ထဲကလွယ်ကူသောလမ်းကိုယူပြီးအဖြစ်ရှုမြင်သည်. အလားတူသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံဘို့ဝင်. ဓါတ်ပုံများနှင့် status အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်တူသို့မဟုတ်ကျော်ကျော်သငျသညျဆိုလြှငျ, သင်တို့ကိုအပူတပြင်းကြည့်ရှုစေမည်. သငျသညျ Poke နှင့် Facebook ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုသင့် flirtatious ခြမ်းဖြင့်နည်းလမ်းများကိုဖြစ်ကြောင်းထင်စေခြင်းငှါနေစဉ်, သူတို့ကအမှန်တကယ်မဟုတ်. နောက်ထပ်, သင်တို့ကိုလူကိုယ်တိုင်ပြီးတော့အွန်လိုင်းပါဝငျအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြကြောင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်. off-line ကသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
အုပ်ချုပ် #3: မသင့်လျော်သောပို့စ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
သင်၏မေတ္တာအကျိုးစီးပွား Facebook ပေါ်မှာလူတိုင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကြောင်းယူဆရန်အန္တရာယ်ကင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. မိသားစုဝင်များထံမှကုမ္ပဏီစီအီးအိုမှလုပ်ဖော်မှ, ပို့စ်သို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောရေးသားချက်များသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကို tag ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ရှက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်မသာပေမယ့်သူကအခြားဦးတည်သည်သင်၏အရူးအမူးပြေးစေတဲ့အကြီးအလမ်းဖွင့်.
အုပ်ချုပ် #4: သင့်ရဲ့ page ကိုထိပ်တန်းထစ်သည်သေချာအောင်လုပ်ပါ
ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့, ကျနော်တို့ကြောင့်လူတစ်ဦးအပေါ်သို့ခုန်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံအခါတိုင်း. သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်သန့်စင်ရန်လိုအပ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကား. သင်တစ်ဦးမသင့်လျော်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ် post ကိုရယ်စရာဖြစ်ပါတယ်ထင်စေခြင်းငှါပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အရူးအမူးရဲ့ဟာသမဖြစ်စေခြင်းငှါ. မည်သည့်တရားကိုရှောင်ကြဉ်ရန်, သင့်ရဲ့အဘွားကြည့်ရှုရန်ရှက်မဖြစ်မယ်လို့တယောက်သို့သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်က.
ဤစည်းမျဉ်းသည်အောက်ပါခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျမကြာမီအောင်မြင်စွာ Facebook ပေါ်မှာချိန်းတွေ့ကြရန်သင့်လမ်းအပေါ်ဖွစျလိမျ့မညျ.